Mpianatra any Frantsa : Hetsika fanoherana an’i Andry Rajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaMpianatra any Frantsa : Hetsika fanoherana an’i Andry Rajoelina
Mpianatra any Frantsa : Hetsika fanoherana an’i Andry Rajoelina
13/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hentitra ary tsy miova amin’ny heviny ireo mpianatra malagasy avy amin’ireo oniversite atsy Frantsa. Manohitra marindrano ny fanasana an’i Andry Rajoelina hanatrika ilay lanonam-panokafana karakarain’ny ASPA sy Newpolis izy ireo…
« Tsy fanaovana propagandy ny sekolinay koa manohitra tanteraka ny fampiasana ny oniversite ho fitaovan-tserasera politika ho an’ny kandidà iray. Tsy azo ekena ny fanomezana tombony ny kandidà iray amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. 36 no isan’ireo kandidà koa nahoana no Andry Rajoelina irery no nasain’ny ASPA sy Newpolis hanatrika ity adihevitra mikasika ny demôkrasia aty Afrika ity, sady tsy nanasana afa-tsy hainoamanjery tokana dia ny « Paris Match » rahateo koa? Adihevitra mikasika ny demôkrasia aty Afrika no ilainay fa tsy propagandy ho an’i Andry Rajoelina».
Miantso ireo rehetra nandrato fianarana, ary ireo izay nivoaka avy tao amin’ny oniversite, taranja, “Sciences Po” ho avy hanohitra ny fahatongavan’i Andry Rajoelina hanatrika ity lanonana atao androany ity ny mpianatra malagasy atsy Parisy. Tsy azo ekena hoy izy ireo ny fanaovana fitaovana ny sekoly indrindra amin’izao fotoam-pifidianana aty Madagasikara izao, ary tsy manana zo hiresaka izany demôkrasia izany akory ity filohan’ny HAT ity. Manohitra marindrano izany ireto mpianatra, ary nanambara mihitsy fa tsy natao hanadiovana na koa hanatsarana endrika olona naka fitondrana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana sy fampiasana miaramila akory ilay lohahevitra nosafidiana “Demôkrasia aty Afrika”.
Nambaran’ireo mpianatra ihany koa fa tsy latsaka tao anaty fahantrana lalina ny firenena nanomboka ny taona 2009, nisian’ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina. Nirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana hoy ihany izy ireo ankoatra ireo fahavoazana maro tsy hita hotanisaina nandritra ny dimy taona nijanonany teo amin’ny fitondrana tsy tamin’ny alalan’ny fifidianana. “Ny fanekena izao fanasana an’i Andry Rajoelina izao dia toa midika ho fankatoavan’ny sekoly olona naka fahefana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana”, araka ny taratasy fiantsoana nataon’izy ireo.
Resy lahatra tanteraka ireto mpianatra sy avara-pianarana ireto fa fototry ny fahapotehan’ny firenena ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 koa tsy azon’izy ireo ekena velively ny hiray petsapetsa amin’i Andry Rajoelina mandritra ity lanonam-panokafana karakarain’ny ASPA sy Newpolis ity. Ho avy haneho izany tsy fankasitrahan’izy ireo ny fanatrehan’ity “jeune pustchiste” ity ireo mpianatra, ireo avara-pianarana nivoaka avy amin’ireo oniversite, taranja “Sciences Po” androany ary miantso izay rehetra miray feo amin’izy ireo amin’izany dia ny fanoherana ny fanonganam-panjakana, fanoherana ny fanaovana fitaovana politika ny sekoly amina propagandy politika.
Maro no tsy mankasitraka sy tofoka manoloana ireo izay nahavita heloka nefa tsy mizaka izany, mitovy hevitra amin’ ny rehetra ihany koa eto anefa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina satria izy ireny hoy izy no fanetriben’ ...Tohiny
Vidin-tsolika : Maka tombony mihoa-pampana ireo mpandraharaha
Mpandeha taxi-bousse : Hotakiana C.I.N…
Filoham-pirenena : Nitondra vahaolana maharitra ho an’ny angovo